ဂျူးဂျူး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်ဂျူးဂျူးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဂျူးဂျူး သည်ဦးခေမာစာရ's ၏ '၀မ်းနည်းခြင်း ပူဆွေးခြင်းအစ အချစ်က' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ဂျူးဂျူးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"လေးစားအပ်ပါသော ဓမ္မအဆွေတော်ခင်ဗျာ....။ ဆိုဒ်..ဓါတ်ပုံတင်ရန် နေရာ၌ တင်ထားသည့် မိတ်ဆွေ၏ ဓါတ်ပုံသည်..ခွင့်ပြုရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါသဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်..။"
♣တောသူမလေး♣ သည်ဂျူးဂျူးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းလေဟာနယ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းပန်းလေးတွေကောက်လို့ သောကအပူအပင်ဟူသမျှ မြူမူန်မျှမကျန်ရှိပဲ ကမ်းစပ်ပင်လယ်လို ထာဝရကင်းဝေးကာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း…"
အဂ္ဂဥာဏ(၀န်းသို) သည်ဂျူးဂျူးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မင်္ဂလာပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဥဇင်းပါအကြောင်းအ၇ာကတော့ဘလော့ကိုကြေငြာတာပါဘလော့နမည်က. www..sarpayalin comပါအကောင့်ကagganan.ashin@gmaim.comပါလာလည်ပါဖုန်းနပတ်ကတော့ 09400307802. အခုသီတင်သုံးနေတာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပါဘလော့ကိုလာလည်ပါ"
သဒ္ဓါဖြူ သည်ဂျူးဂျူးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင်။ မိမိမေလ်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို (…"
ဂျူးဂျူး သည် Δℓωαʏƨ βʏɛ's ၏ 'Gtalk နဲ့ VZO အကောင့်လေးတွေဖလှယ်ကြရအောင်' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဂျူးဂျူး joined Δℓωαʏƨ βʏɛ's group
Gtalk နဲ့ VZO အကောင့်လေးတွေဖလှယ်ကြရအောင်
နိုင်ငံအရပ်ရပ် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ စက္ကန့်မခြားဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ အလွမ်းတွေဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့သတင်းတွေ လက်ခံ မျှဝေနိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာ့ အငွေ့အသက်လေးတြွေိခုံလွှမ်းထားနိုင်ဖို့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို မေ့ပျောက်မသွားစေဖို့အတွက်ဒီ အဖွဲ့ လေးကိုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ကဲ...... အားလုံးပဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်စွာ ပေါင်းစည်းကြရအောင် ...See More
ဂျူးဂျူး ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
7:28pm အချိန်မတ် 16, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:52pm အချိန်မတ် 16, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:30pm အချိန်ဇူလှိုင် 15, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဆိုဒ်..ဓါတ်ပုံတင်ရန် နေရာ၌ တင်ထားသည့် မိတ်ဆွေ၏ ဓါတ်ပုံသည်..ခွင့်ပြုရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါသဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်..။
5:03pm အချိန်မတ် 16, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:00pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2013, တွင် အဂ္ဂဥာဏ(၀န်းသို) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဥဇင်းပါအကြောင်းအ၇ာကတော့ဘလော့ကိုကြေငြာတာပါဘလော့နမည်က. www..sarpayalin comပါအကောင့်ကagganan.ashin@gmaim.comပါလာလည်ပါဖုန်းနပတ်ကတော့ 09400307802. အခုသီတင်သုံးနေတာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပါဘလော့ကိုလာလည်ပါ
8:47pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 2013, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:44pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။